दुई आणविक आक्रमण भोगेको जापानमा अमेरिकाप्रति किन घृणा देखिँदैन ? | Ratopati
personश्रवण उप्रेती exploreजापान access_timeफागुन १९, २०७४ chat_bubble_outline0
तर, यो विनाशकारी हमलाको बावजुद हाल जापान र अमेरिका राजनैतिक र सामाजिक रुपमा मित्र शक्ति हुन् ।
सन् २०११ मा सम्पन्न एक सर्भेक्षणमा ८५% जापानीहरु अमेरिकालाई सकारात्मक रुपले हेर्ने देखिएको थियो ।
जापानमा अमेरिकाप्रति कसरी यो मित्र भावना विकास भयो ?
आर्थिक लगानीको अतिरिक्त अमेरिकाले जापानको अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म सकारात्मक परिवर्तन पार्ने श्रम अधिकार लागु ग¥यो । उसले तत्कालिन समयमा जापानी अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध गरिरहेको एकाधिकारहरु भङ्ग ग¥यो । साथै अमेरिकाले सो समयमा जापानको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिने प्रविधिक र व्यवसाय मैत्री शिक्षाको जग बसाल्यो । सो समयमा अमेरिकाले आफूसँग रहेको प्रविधीहरु जापानसँग बाँढेर उसले हासिल गरेको ‘निर्माण हव’ को बाटो खोलिदिएको थियो ।
यसको अतिरिक्त जापानमा लागु रहेको संविधान अमेरीकी विज्ञहरुले बनाइदिएका हुन् । यही संविधान अन्तर्गत जापानी राजनीतिले स्थीरता प्राप्त गरेकाले यसलाई जापानको लोकतन्त्रका विकासका लागि जस दिइन्छ ।
युद्धपछिको जापानको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले गरेका यी हस्तक्षेपहरुले गर्दा जापानले आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक पुनर्बहाली हासिल गर्न सफल भयो ।
आज जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । र, अमेरिका उसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयात्री हो । अमेरिका जापानको कार र विद्युतीय उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मध्ये पर्छ । साथै, दुई देशबीचमा एक ‘साझा सुरक्षा सहायता सम्झौता’ रहेको छ । यसको मुख्य बुँदामा दुई देशले एक अर्कोलाई बाह्य आक्रमणको समयमा सैन्य रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने भनिएको छ ।
यी प्रयासहरुको परिणाम स्वरुप पछिल्लो पुस्ताका नागरिकमा एक अर्काप्रति सकारात्मक धारणाको विकास भएको पाइन्छ ।